January 21, 2020 phyo News, Premier League 0
Manchester United's Norwegian manager Ole Gunnar Solskjaer gestures to supporters on the pitch after the English Premier League football match between Newcastle United and Manchester United at St James's Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on October 6, 2019. - Newcastle won the game 1-0. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)
ယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ အခုလိုအဓိကတိုကျစဈမှူး ရကျရျှဖို့ဒျ ဒဏျရာရရှိနခြေိနျမှာ ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီအတှငျး ရောငျးခခြဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး လူကာကူရဲ့နရောမှာ အစားမထိုးနိုငျမှုအပျေါ နောငျတအကွီးအကယျြရနပွေီဖွဈကွောငျး ယူနိုကျတကျကှငျးလယျလူဟောငျး ပေါလျအငျ့ဈက ဝဖေနျတိုကျခိုကျလိုကျပါတယျ။
”တကယျလို့ လူကာကူကို ရောငျးလိုကျလို့ အိုလီ နောငျတမရခဲ့ဘူးဆိုရငျတောငျ အခုတော့ နောငျတတရားတှနေဲ့ လောငျကြှမျးနလေောကျပါပွီ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ လူကာကူရဲ့ဘောလုံးအထိနျးအသိမျးကို သဘောမကသြူဖွဈပမေယျ့ သူ့ဆီကနေ တဈရာသီ ဂိုး ၂၀၊ ၂၅ဂိုးလောကျတော့ အသာလေးမြှျောလို့ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဟာ သူ့နရောမှာ အစားမထိုးဘဲ ရောငျးခလြိုကျတာပါ”
”အခုတော့ အဲဒီအတှကျ သူတို့ ပွနျပေးဆပျနရေပါပွီ။ လှနျပွီးမှ သိတာက ကောငျးတော့မကောငျးပမေယျ့ အိုလီအနနေဲ့ လူကာကူကို ထှကျသှားဖို့ ခှငျ့မပွုခဲ့သငျ့ပါဘူး”လို့ ပေါလျအငျ့ဈက ပွောပါတယျ။
ဆိုးလျရှားက ရကျရျှဖို့ဒျရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ ယခုလအတှငျး တိုကျစဈမှူးတဈဦးချေါယူဖှယျရှိနတေယျလို့ အရိပျအမွှကျဖှငျ့ဟခဲ့ပွီး အရငျတုနျးက ဟာလနျးကို ချေါယူဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီဆဲလျဘတျတိုကျစဈမှူးက ဒေါ့မှနျကို ပွောငျးရှသှေ့ားကာ ပေါလျအငျ့ဈက အဲဒီအဖွဈဟာ ယူနိုကျတကျအတှကျ ရှကျစရာကောငျးကွောငျး ဆိုပါတယျ။
”ဇနျနဝါရီမှာ ကစားသမားသဈ မဖွဈမနခေျေါယူရမှာပါ။ ဟာလနျးရဲ့ဖွဈရပျက ပိုပွီးရှကျစရာကောငျးသလို နဂိုကတညျးက နာကငျြနမှေုကို ပိုဆိုးစခေဲ့တာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ဟိုကောငျလေးက ပှဲဦးထှကျမှာ လူစားဝငျလာပွီး ဟကျထရဈသှငျးသှားတယျလေ”
”လီဗာပူးနဲ့ပှဲမှာ မာရှယျရဲ့လှဲခြျောမှုကို ခငျဗြားတို့လညျး တှလေို့ကျတာပဲ။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ယူနိုကျတကျတိုကျစဈကို ဦးဆောငျဖို့ မလုံလောကျဘူးလေ။ ဂရငျးဝုဒျက အလားအလာအမြားကွီးရှိပမေယျ့ ငယျသေးတယျ။ ဒီလိုကစားသမားမြိုးကို ဖိအားတှအေမြားကွီးသှားပေးလို့မရဘူး”လို့ ပေါလျအငျ့ဈက ပွောပါတယျ။
လူကာကူကို ရောင်းလိုက်လို့ အိုလီ နောင်တအကြီးအကျယ်ရနေလောက်ပြီလို့ ပေါလ်အင့်စ် ပြောကြား
ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ အခုလိုအဓိကတိုက်စစ်မှူး ရက်ရ်ှဖို့ဒ် ဒဏ်ရာရရှိနေချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအတွင်း ရောင်းချခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူရဲ့နေရာမှာ အစားမထိုးနိုင်မှုအပေါ် နောင်တအကြီးအကျယ်ရနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူဟောင်း ပေါလ်အင့်စ်က ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။
”တကယ်လို့ လူကာကူကို ရောင်းလိုက်လို့ အိုလီ နောင်တမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် အခုတော့ နောင်တတရားတွေနဲ့ လောင်ကျွမ်းနေလောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လူကာကူရဲ့ဘောလုံးအထိန်းအသိမ်းကို သဘောမကျသူဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဆီကနေ တစ်ရာသီ ဂိုး ၂၀၊ ၂၅ဂိုးလောက်တော့ အသာလေးမျှော်လို့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ သူ့နေရာမှာ အစားမထိုးဘဲ ရောင်းချလိုက်တာပါ”
”အခုတော့ အဲဒီအတွက် သူတို့ ပြန်ပေးဆပ်နေရပါပြီ။ လွန်ပြီးမှ သိတာက ကောင်းတော့မကောင်းပေမယ့် အိုလီအနေနဲ့ လူကာကူကို ထွက်သွားဖို့ ခွင့်မပြုခဲ့သင့်ပါဘူး”လို့ ပေါလ်အင့်စ်က ပြောပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားက ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ယခုလအတွင်း တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးခေါ်ယူဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ အရိပ်အမြွက်ဖွင့်ဟခဲ့ပြီး အရင်တုန်းက ဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အဲဒီဆဲလ်ဘတ်တိုက်စစ်မှူးက ဒေါ့မွန်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားကာ ပေါလ်အင့်စ်က အဲဒီအဖြစ်ဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် ရှက်စရာကောင်းကြောင်း ဆိုပါတယ်။
”ဇန်န၀ါရီမှာ ကစားသမားသစ် မဖြစ်မနေခေါ်ယူရမှာပါ။ ဟာလန်းရဲ့ဖြစ်ရပ်က ပိုပြီးရှက်စရာကောင်းသလို နဂိုကတည်းက နာကျင်နေမှုကို ပိုဆိုးစေခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် ဟိုကောင်လေးက ပွဲဦးထွက်မှာ လူစားဝင်လာပြီး ဟက်ထရစ်သွင်းသွားတယ်လေ”
”လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာ မာရှယ်ရဲ့လွဲချော်မှုကို ခင်ဗျားတို့လည်း တွေ့လိုက်တာပဲ။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်ဖို့ မလုံလောက်ဘူးလေ။ ဂရင်းဝုဒ်က အလားအလာအများကြီးရှိပေမယ့် ငယ်သေးတယ်။ ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို ဖိအားတွေအများကြီးသွားပေးလို့မရဘူး”လို့ ပေါလ်အင့်စ်က ပြောပါတယ်။
ကိုကျ ၇၀ လောကျဆှဲပွေးသှငျးယူတဲ့ တဈကိုယျတျောဂိုးနဲ့ အာဆငျနယျရဲ့သူရဲကောငျးသဈဖွဈလာတဲ့ မာတငျနယျလီ